Digniin Ay Midowga Murashixiinta Ay Kasoo Saareen Sida Ay Ku Socoto Doorashada Golaha Baarlamaanka – Great Banaadir
Digniin Ay Midowga Murashixiinta Ay Kasoo Saareen Sida Ay Ku Socoto Doorashada Golaha Baarlamaanka
MUQDISHO – Midowga Murashixiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka hadlay Qaabka ay ku socoto Doorashada Golaha Baarlamaanka 11-aad, kadib markii ay Maanta oo Khamiis ah ay Kulan ku yeesheen Magaalo Madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Afhayeenka Midowga Murashixiinta Soomaaliya, Daahir Maxamuud Geelle oo Kulanka kadib Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ka digayaan in sidaan kusii socoto Doorashada Golaha Baarlamaanka oo uu sheegay inay tahay Qaab Doorasho oo Boob ah.
Waxaa uu sheegay Afhayeen Daahir Maxamuud Geelle in Qaabka ay Doorashada ku bilaabatay laga dhexli doono Qallalaase Siyaasadeed, Dagaal iyo Dalka oo gaara meel xun, wuxuuna intaas kusii daray inay doonayaan in wax laga qabto Arrintaan.
Afhayeenka ayaa tilmaamay in Midowga Murashixiinta Madaxweynaha Soomaaliya oo kaashanayey Bulshada Soomaaliya, ay Is-horistaag ku sameeyeen in Dalka uu aado Muddo Krorsi Sharci-darro ah, isagoona sheegay in wax aan horey loo arag ay socoto.
Daahir Maxaamuud Geelle ayaa Carabka ku dhuftay in Maalmaha soo socda ay yeelan doonaan Kulamo Wadatashi ah,diiradane lagu saari doono Samata-bixinta Bulshada Soomaaliyeed ee Hannaanka boobka ah ee ku socoto Doorashada.
Midowga Murashixiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhawaan shaaca ka qaaday in aysan aqbali doonin Doorasho aan Jadwalka sax ah laheyn, iyagoona Wasiir Koowaadka Dowladda Xilgaarsiinta Jamhuuriyadda Soomaaliya u jeediyay Eedeyn kulul.
Koox Hubeysan Oo Goordhow Oday Ku Dilay Deegaanka Ceelasha Biyaha
GERD negotiations reach a dead-end
Taiwan seeking to acquire long-range cruise missiles from US
Shops in Great Britain fear gaps on shelves as new Brexit import rules hit